दलान नेपाल : October 2015
बाबुरामको 'मधेश माहौल'
at 1:32 AM Posted by Dalan
पार्टी तथा संसद सवै वाट राजिनामा दिएर नयां शक्तिको दौडमा उत्रेका पुर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भटराई धोती कुर्ता लगाएर पश्चिममा आन्द्योलनरत थारु होस वा पुर्वका मधेश सवै ठाउमा व्यापक दौडाहामा छन । व्यापक प्रतिकुलताका वावजुद पनि उनी पहिलो पटक जारी मधेश आन्द्योलनलाई सहि भन्दै गएको १२ असोजमा जनकपुर झरे । उनी पहिलो यस्ता शिर्ष तहका नेता थिए जो मधेश आन्दोलनमा समर्थन जनाउदै मधेश झरेका थिए । अत्यन्तै आक्रोशित रहेको मधेशमा उनको स्वागत पनि मौनता देखियो । कहि कतै आक्रोश पनि तर आम बौद्धिक स्तरमा भटराई प्रति व्यापक साहनभुति देखियो । भटराई जनकपुर आए पश्चात याहा बोल्ने क्रममा आफु जारी मधेश आन्द्योलनको व्यवस्थापनमा काठमाडौ संग पुलको भुमिका खोल्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेका थिए । आम मधेशीहरुको अहिलेको बुझाईमा काठमाडौ अर्थात राज्यसताका हर्ताकर्ताहरु मुख्यगरी एमाले, काग्रेस र एमाओवादी मधेशीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न तयार छैन भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा भटराइको मुभलाई मधेशमा साकारातम्क रुपमा टिकाटिप्णीहरु भइरहेको पाइन्छ । यद्यपी उनले पनि जारी भएको नयां संविद्यानमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनको कतिपय ठाउमा आलोचनाहरु समेत सुन्नमा पाइन्छ । तर हालै व्यवस्थापिका संसदमा भएको नयां प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आन्द्योलनरत मधेशी पार्टीहरु सहभागी भए पछि भटराईको पक्षको थप साकारात्मक टिकाटिप्पणीहरु हुन थालेको देखिन्छ ।
वार्तामा यत्रो झमेला किन ?
at 1:29 AM Posted by Dalan
मधेशमा आन्दोलन भएको दुई महिना नाघि सक्दा पनि सता पक्ष र आन्द्योलनरत पक्षहरु विच ठोस रुपमा वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको छैन । आन्द्योलनरत पक्षलाई हिजो शुक्रवार फेरी एकचोटी नयां प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन । यस अघि पनि पुर्व प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले आन्दोलनरत पक्षलाइ पटक पटक वार्ताका लागी औपचारिक पत्रहरु लेखे । पछि वार्ता टोली नै गठन गरियो तर आन्द्योलनरत मोर्चाको वार्ता टोली संग दुई दिन मात्रै वार्ता टेवलमा बसेको पाइयो । प्रमुख दलहरु सरकार हेरफेरको चक्करमा लागे पछि वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । नयां प्रधानमन्त्रीको चयनको क्रममा संसदमा बोल्ने क्रममा काग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री कोईराला देखि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल सम्मले आफुहरुले एमालेका कारण जारी मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको दावी गरेका थिए । एमाले अहिले सम्म त्यसलाई खण्डन गरेका छैन । काग्रेसीहरुले आन्द्योलनरत मधेशी मोर्चाको माग अनुसार संविद्यान संशोधन गर्न एमाले तयार नभएको बताएका छन ।
'मधेश है तो नेपाल है, नेपाल है तो मधेश है ।'
at 1:55 AM Posted by Dalan
श्याम शंकर लाल विहिवार कुरा गर्दै भने, नेपालमा जारी मधेश आन्द्योलन हाम्रा कुटुम्ब तथा नादेतारहरुको भविष्य संग जोडिएको आन्द्योलन हो , त्यसमा हामी चुप लगाएर कसरी बस्न सक्छौ ।
भिठामोड - (भारतीय वजार)
श्याम शंकर लाल महोतरीको सिमवर्ती वजार भिठामोडका निवासी हुन । लाल त्याहाका विजेपी पार्टी संग आवद्धता राख्छन । स्थानिय स्तरमा ख्याती कमाएका उनी हालै जारी मधेश आन्द्योलनलाई सर्मथन गर्न त्याहा गठित कार्यसमितीका अध्यक्ष पनि हुन । उनकै नेतृत्वमा भिठामोठ, सुरसण्ड र सितामढी एब दिन बन्द समेत गराइयो । जारी मधेश आन्द्योलनमा भारतको सहयोग र समर्थनलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्णी भईरहा स्थानिय स्तरमा चाही पारीको राम्रै सहयोग छ । लाल विहिवार कुरा गर्दै भने, नेपालमा जारी मधेश आन्द्योलन हाम्रा कुटुम्ब तथा नादेतारहरुको भविष्य संग जोडिएको आन्द्योलन हो , त्यसमा हामी चुप लगाएर कसरी बस्न सक्छौ । राजनितीमा वडो परिपक्क देखिनी उनी सुरुमै जारी आन्द्योलनवारेमा छिप्पणी गर्दै भने, मधेश है तो नेपाल है, और नेपाल है तो मधेश है । उनले नेपाल भित्र मधेशी र पहाडी विच गृहयुद्धको अवस्था आए र मधेश अलगाव वादको पक्षमा अगाडी वढे पुरै नेपालकै अस्तिव समाप्त हुन जान्छन । त्यसैले उनी भन्छन, नेपालको सरकार मधेशीहरु संग झुक्नै पर्छ ।
राजेन्द्र महतो र जयकृष्ण गोईत विच सिमापारी बैठक
at 2:44 AM Posted by Dalan
गएको शनिवार जनकपुरमा आयोजना गरिएको श्रदान्जलीसभामा सहभागी महतो, साथमा मोर्चाका अन्य नेताहरु
गएको दुई महिना देखि आनद्योलनमा अरु मधेशी नेतृत्वहरु भन्दा आफुलाई भिन्न शैलीमा प्रस्तुत गर्दै आएका सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो जनकपुर वाट सुटुक्क सिमापारी छिर्दै अखिर तराई मुक्ति मोर्चाका संयोजक जय कृष्ण गोईतसंग बैठक गरेका छन । गएको शनिवार जनकपुरमा आयोजना गरिएको श्रदान्जलीसभामा उनी प्रमुख अतिथीको रुपमा सहभागी हुन याहा आईपुगेका थिए । उनी प्रमुख अतिथी रहेको उक्त श्रदान्ज्लीसभामा प्रतिकात्मक रुपमा उनको दुवै तीर 'मधेशी सेना' समेत राखिएको थियो । पछिल्लो समयमा आनद्योलनको क्रममा पुर्व देखि पश्चिम सम्मको दौडाहामा रहेको उनी उत्तेजक भाषणहरु गरीरहेका कारण मोर्चा भित्रै पनि उनको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भईरहेको देखिन्छ ।
गएको शनिवार जनकपुर आएका महतो आईतवार अस्वस्थ भएको भन्दै यही निर बसेका थिए । महतो याहा निर आफना आसेपासेहरुलाई दिएको पुर्व सुचना अनुसार उनको जनकपुरवाट विराटनगर जाने कार्यक्रम थियो । तर उनी आईतवार जनकपुरमै पुरै दिन रेस्ट गरेर सोमवार दिउसो चार वजे याहा वाट सितामढीका लागी हिडेका थिए । महतो जनकपुरको वेलकम होटलमा बसेका थिए । होटलवाट उनी दिउसो ४ बजे मात्रै निस्केको रेकर्ड देखिन्छ । स्रोत भन्छन, होटलवाट उनी निस्के पछि मोटरसाईकलको माध्यमवाट अवेर सांझ महोतरीको भिठामोड हुदै सितामढी पुगेका थिए । जनकपुरवाट सिमावर्ती भारतीय सहर भिठामोड पुग्न कमत्ीमा पनि अढाई देखि तीन घण्टा लाग्छ ।
के सोच्छन काठमाडौ, के चाहन्छन मधेश ?
at 2:19 AM Posted by Dalan
जारी आनद्योलनकै क्रममा मधेशका आन्द्योलनकारीहरु विरगंजमा गिरिजा प्रसाद कोईरालाको सालिक तोडदै
पछिल्लो दश बर्ष यता मधेश तेस्रो पटक आन्द्योलनमय भएको छ । इतिहासका जानकारहरु मधेशीहरुको अधिकारको लडाई नेपालमा २००८ कै सेरोफेरोमा सुरु भएको बताउने गरेका छन । २००८ कै सेरोफोरो देखि नै नेपालमा तराई मधेशको नाउमा राजनिती पनि सुरु भएको देखिन्छ । तर २०६३ सालको माघमा भएको पहिलो मधेश विद्रोहले मधेशको राजनितीक मुद्धाहरुलाई राष्टिय तथा अन्तराष्टियकरण गरेको बुझाइ छ । पहिलो मधेश विद्रोहको लगतै दोस्रो मधेश आन्दोलन पनि भयो र तत पश्चात मधेशी पार्टी पहिलो संविद्यानसभाको निर्वाचनमा भाग मात्रै लिएन कि निर्वाचन हुने सुनिश्चितताको वातावरण पनि निर्माण गरे । तर पछिल्लो पटक फेरी मधेशी पार्टीहरुले आन्द्योलनमा होमिन संकेत गर्न थाले पछि काठमाडौमा यत्रतत्र सधै एउटा प्रश्न सोधिने गरेको देखिन्थयो । मधेशीशहरुले आखिर के खोजेका हुन, सवै कुरा त छदै छन नि, पहिलो जस्तो अब विभेद पनि छैन नि ? यी र यस्ता अनेकन प्रश्नहरु पहाडे भनिने समुदायका सवै तप्काहरुको मुखवाट सुनिने गर्छन । आखिर काठमाडौ के सोच्छन र मधेश के चाहेका छन त ? जनकपुर स्थित प्राध्यापक भोगेन्द्र झा भन्छन, सवै भन्दा ठुलो समस्या नै म यही निर देख्छू । उनी भन्छन, यसले काठमाडौको सोच प्रतिविम्व गर्छन । प्राध्यापक झाको वुझाईमा काठमाडौ मधेशवाट त्रसित भएर यस्तो मानसिकता बनाएका छन । झा भन्छन, तपाई काठमाडौमा बसेर मात्रै यो प्रश्नको सामना गरिरहनु भएको छैन, हामीहरु काम विशेषले काठमाडौ जादा पनि यस्ता प्रश्नहरु आफनै स्तरमा पहाडे समुदायका साथीहरु वाट सामना गर्नु पर्छ ।
मधेश गम्भिर 'टर्निंग प्वाइन्ट' मा
at 4:18 AM Posted by Dalan
शनिवार जनकपुरको वाह्विद्या मैदानमा आयोजना गरिएको श्रदान्जलीसभाको मन्चमा नक्कली वन्दुक सहित प्रतिकात्मक रुपमा मधेशी सेना हु भन्दै उभिएको मधेशी युवा
गएको १८ असोजमा आन्नदोलनरत मधेशी मोर्चाको धनुषा समितीको बैठकमा जनकपुरमा अगुवाई गरीरहेका युवा सरोज मिश्राले समानान्तर सरकार संचालन गर्न प्रस्ताव गरे । मिश्रा जनकपुर क्षेत्रमा आन्द्योलनको उठानमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका मधेश अधिकार संघर्ष समिती मासका अध्यक्ष पनि हुन । सरोज मिश्राले १८ असोजको स्थानिय मधेशी मोर्चाको बैठकमा उक्त प्रस्ताव गर्दा उनको तर्क थियो, आन्द्योलनको दुई महिना हुन लाग्दा पनि सरकारले मधेशीहरुलाई वेवास्ता गरेको गर्यो छ, त्यसैले हामी छुटै आफना सवै निकायहरु संचालन गरौ । उनले सरकारी स्टाईलमा जिल्ला प्रशासन देखि प्रहरी सहित करदाता कार्यलयहरु मधेशी सरकारको नाउमा खोलेर मधेशमा सबै कुरा यही स्तरमा वाट संचालन गर्न सुझाए । उक्त बैठकमा धनुषाका मधेशी मोर्चामा संग्लन चार मधेशी पार्टीहरुका अध्यक्षहरु उपस्थिती थिए । सदभावनाका धनुषा अध्यक्ष संजय सिंह, तमलोपाका परमेश्वर साह, फोरम नेपालका शेष नारायण यादव, तमसपाका रुप नारायण यादव र वैद्य माओवादीका धनुषा अध्यक्ष श्रीनारायण प्रतिहस्त उक्त बैठकमा सहभागी थिए । बैठक स्रोतका अनुसार युवा अगुवा सरोज मिश्राले मधेशमा समानान्तर सरकार संचालन गर्न गरेको प्रस्ताव वारे नेताहरुले यसवारेमा छलफल गरेर थप कुरा अर्को बैठकमा गर्ने जनाएका थिए ।
सरकार निर्माणको चक्करले मधेशी मोर्चासंगको वार्ता ओझेलमा
at 12:52 AM Posted by Dalan
प्रमुख दलहरु नयां प्रधानमन्त्रीको चयनमा व्यवस्त भए पछि सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा विच हुने भनिएको वार्ता ओझेलमा परेको छ । गएको बुधवार बसेको दुवै पक्षको वार्ता टोलीको बैठकले हिजो शुक्रवार देखि नै ठोस वार्ता अगाडी वढाउने जनाएका थिए । तर हिजो शुक्रवार वार्ता हुन सकेन । वार्ता टोलीका सदस्य तथा तराई मधेश सदभावना पार्टीका नेता राम नरेश रायका अनुसार हिजो शुक्रवार सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा काग्रेस नेता महेश आचार्यले तमलोपा नेता सर्वेन्द्र नाथ सुक्लालाई फोन गरेर आज वार्ताको बैठक असम्भव रहेको भन्दै शनिवार बस्ने बताएका थिए । तर रायका अनुसार शनिवार पनि वार्ताको बैठक बस्ने सम्भावना छैन । उनी भन्छन, प्रमुख दलहरु सरकार निर्माणको लागी भईरहेको विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरुमा व्यवस्त रहेकाले वार्ताको कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।
मधेशमा 'असहज' मिडिया
जनकपुरवाट प्रकाशित हुने द इक्सक्लुसिभभ साप्ताहिक पत्रिकाले ३ असोजमा नयां संविद्यानको विरोधमा आफनो सम्पादकिय ब्लायक आउट गरेर विरोध जनाएका थिए ।
समान्यतया पत्रकारहरु आफनो वाईलाइनमा समाचारहरु प्रकाशित भए पछि खुशी हुन्छन । तर हालै मधेशको एउटा जिल्लामा अन्नणपुर्ण पोष्ट दैनिकमा काम गरीरहेको पत्रकारले सुनाए, अचेल मेरो समाचार आएन भन्ने म अत्यद्यिक खुशी हुने गर्छूृ । उनले त्यसको कारण वारेमा भने, किनकी आन्दोलनको समाचार नै आउदैन भन्ने कुरा हामी बुझिसकेका छौ, समाचार आउने भन्ने आन्दोलनको वारेमा नाकारात्मक मात्रै हो, जसले स्थानिय स्तरमा थप तनाव वाहेक अरु केहि दिदैन । त्यसैले समाचार नै आएन भने, हामी ढुक्क हुन्छौ । स्थानिय एक पत्रकारको यो भनाईले मधेशमा ५३ दिन देखि जारी आन्द्योलनमा काम गरीरहेको काठमाडौ केन्द्रित मिडियाका स्थानिय संवाददाताहरुको मनोदशालाई राम्ररी उजागर गर्छन । हुनत मधेशमा हुने हरेक विरोध देखि अन्य गतिविधीमा काठमाडौ केन्द्रित राष्टिय मिडियाको आलोचना हुने गर्छन । तर हाल जारी आन्दोलनको क्रममा मिडिया प्रति अत्यद्यिक आक्रोश र निशाना बनाइएको छ ।
at 5:29 AM Posted by Dalan
राष्टिय दैनिक अखवारहरु जारी आन्द्योलनको क्रममा जलाउदै प्रर्दशनकारीहरु
गएको शनिवार दिउसो महोतरीको वर्दीवासमा यो संवादाता पुग्दा एक जनाले झोलामा पत्रिका झुण्डिएको देखे पछि सोधे, काठमाडौ वाट पो आउनु भा को हो ? यसो पत्रिका हेर्न पाम न । किन पत्रिका काठमाडौवाट आउने संग मात्रै हुन्छ कि क्या हो भनेर प्रतिप्रश्न गरे ? सिरहाका युगल किशोर साह यो संवादातालाइ त्यसरी प्रश्न गरे पछि मेरो प्रतिप्रश्नमा उनले फेरी फर्काए, हो त नि । याहा त आउदैनन नि पत्रिकाहरु । मैलै किन भनेर फेरी प्रतिप्रश्न गरे ? त्यस पछि उनले भन्यो, आन्द्योलन सुरु भए देखि नै यता त पत्रिका आउदैनन नि । मेरो लागी समेत यो नयां सुचना थियो । किनकी आन्दोलन सुरु भए पछि मधेशका ठाउ ठाउमा राष्टिय पत्रिकाहरु जलाइएको समाचार पढेको र स्वयंम लेखेको पनि थिए । तर मधेशका पुर्वी क्षेत्रमा पत्रिकाहरु नै आउदैनन भनेर मेरो जानकारीमा थिएन । उक्त दिन अर्थात गएको शनिवार म विहानै विरगंजवाट पुर्व तिर लागेको थिए । चन्द्रनिगाहमा केहि घण्टा विताए पछि वर्दीवास पुगेको थियो । वर्दीवास पुग्ने् वितिकै यो सुचनाले कानमा क्म्पन महसुस गरायो । त्यही दिन अवेर साझ सिरहाको लहानमा पुगे । भोली पल्ट विहानै लहानको पत्रिका पसलमा पत्रिका हेर्ने उदेश्यले पुगे तर त्याहा वास्तविक जानकारी पाइयो । लहानका पत्रिका पसलेले सुनायो, गएको भदौ १ गते पछि पुर्वको विराटनगरमा तराई मधेशको सर्लाही, रौतहट सम्म प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरु पुगीरहेको छैन । मैलै कारण सोध्दा मेरो अनुमान झै उनले सुनाए, आन्द्योलनकारीहरुले ठाउ ठाउमा घोषीत रुपमै प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुलाई कारवाही गनेृ घोषणा गरेपछि उनीहरु त्रासका कारण बन्द नै गरीदिए । नागरिक दैनिकका सिरहा संवाददाताका मिथलेस यादवका अनुसार १ भदौमा विराटनगरमा प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुले बोकेर गाडीहरु निस्के पछि सिरहामा सवै गाडीहरु अडकेको थियो । २४ घण्टा ती गाडीहरु सैनिक क्याम्पमा राखे पछि हामीले विराटनगर नै फर्कायौ । त्यसपछि माथी वाट नपठाउने निष्कर्ष सहित पत्रिकाहरु पठाउन छाडिएको यादव बताउछन ।
भारदहका भारी मनहरु
at 3:35 AM Posted by Dalan
देव नारायण विश्वास
भारदह सप्तरीका देव नारायण विश्वास गएको १० दिन देखि घर अगाडीको दलानमा २४ औ घण्टा विछिप्त रुपमा आराम गरीरहेका हुन्छन । विश्वास गएको १ भदौमा भारदहमा प्रहरीको गोली वाट सिकिस्त धाईते भएका थिए । त्यस पछिको १ महिना भन्दा वढी उनी विराटनगर र धरान अस्पतालमा थिए । १० दिन अगाडी धरानमा उनको् अपरेशन भए पछि उनी भारदह स्थित आफनो घरमा फर्किएका छन । घरमा दुई ओटा छोरी विवाह गर्ने जिम्मेवार काघमा भएको एउटा समान्य किसान विश्वासका लागी अहिले पहाड भन्द्या ठुलो समस्या आईपरेको जस्तो महसुस भईरहेको छ । मधेशको समाजमा अहिले पनि छोरीको विवाह ठुलो आर्थिक भारको कार्य मानिन्छन । गएको सोमवार दिउसो विश्वासको घरमा पुग्दा उनी अचेत अवस्थामा सुतिरहेको थियो । कुराको सुरुमै उनलाई सोधे उपचारको लागी कस कसले अहिले सम्म सहयोग गर्यो नि ? उनी भने, अहिले मेरो आफनै ४० हजार खर्च गरेर उपचार गराए, स्थानिय मधेशी मोर्चाका नेताहरु त्यस मध्ये १६ हजार रुपैया हामीलाई दिएका छन । त्यस वाहेक अरु कसैले केहि दिएको छैन । सरकारले तीन हप्ता अगाडी जारी मधेश आन्दोलनको क्रममा धाईते भएकाहरुको उपचार सरकारी पक्षले निशुल्क गरी दिने् निर्णय गरेका थिए । तर भारदह घटनाका सवै भन्दा सिकिस्त धाइते विश्वास भन्छन, अहिले सम्म कसैले सोध्न समेत आएन ।
चन्द्रनिगाहपुरको "चटकन" - सचेत होउ
at 8:01 AM Posted by Dalan
चन्द्रनिगाहपुर (रौतहट) -
गएको शुक्रवार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा थरुहट र मधेशी आन्दोलनकारीको प्रहरी संग झडप भयो । आन्द्योलनकारीहरुले पुर्व घोषणा गरेको राजमार्ग अवरुद्ध पार्ने कार्यक्रम अनुसार गएको शुक्रवार सदरमुकाम गौरवाट आन्द्योलनकारीहरुले जुलुस राजमार्ग आउनै लागेको चाल पाउदा प्रहरीहरुले १ किलोमिटर वरै छेकवार लगायो र आन्द्योलनकारीहरुलाई तितिरवितर पारेर उनीहरुलाई फर्काए । प्रहरीले रवर गोली तथा अश्यु ग्यास समेत चलाए । आन्द्योलनकारी तर्फ एक जना धाईते भएका छन भने केहि प्रहरीहरुलाई पनि समान्य चोटपटक लागेको छ । आखिर मधेशका सम्पुर्ण नाकाहरु ठप्प छन, आन्द्योलनकारीहरु ठाउठाउको राजमार्गहरु अवरुद्ध पार्दै आएका छन । तर रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा मधेशी थारु आन्द्योलनकारीहरु प्रर्दशन गर्न जादा किन प्रहरीले अवरुद्ध पार्यो त ? चन्द्रनिगाहपुर इलाका प्रहरी कार्यलयका डिएसपी मनोज कुमार यादव स्वयंम भन्छन, हामीले पनि आन्द्योलनकारीहरुलाई १ घण्टा चक्काजाम गरेर विरोध कार्यक्रम गर्दा केहि फरक नपर्ने बताएका थियौ । तर म स्वयंम आन्द्योलनकारीहरुलाई राजमार्ग अवरुद्ध पार्ने दिन विहान ४र५ जनालाई समन्यवका लागी पठाई दिन भनेका थियौ । तर त्यसो भएन । आन्द्योलनकारीहरुलाई प्रहरीले शुक्रवार चन्द्रनिगाहपुर भन्दा १ किलोमिटर वरै रोकेर सुरुमा रोक्न खोजे नमाने पछि वल प्रयोग गर्ेर कार्यक्रम विथोले । चन्द्रनिगाहपुरका डिएसपी यादव भन्छन, हामीले आन्द्योलनकारीहरुलाई १ किलोमिटर वरैवाट फिर्ता नपठाएको भए त्यो दिन चन्द्रनिगाहपुरमा 'मधेशी पहाडीको दंगा' फैलिने निश्चित थियो । हामीले त्यही भएर १ किलोमिटर वरै उनीहरुलाई छेकवार गर्यौै । डिएसपी यादवले चन्द्रनिगाहपुरमा देखिएको सम्भावित 'मधेशी र पहाडी' विचको भडकावको वर्णण गरेन । उनले खाली यती भन्या,े स्थिती हाम्रो नियन्त्रण भन्द्या वाहिर जान सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो, त्यसैले हामीले सम्भावित दुर्घटना रोक्यौ ।
केपी ओली विरुद्ध "मैदान मधेश"
एमाले अध्यक्ष ओलीको पुतला बनाएर प्रर्दशन गर्दै आन्दोलनकारीहरु
गएको ३ असोजमा संविद्यानसभाले नयां सविद्यान जारी गरे पछि काग्रेस एमाले र एमओवादीले दिपावली मनाउन आफना सवै जिल्लाहरुमा निर्देशन दिएका थिए । संविद्यान जारी हुदा मधेश आन्दोलनमा होमिएको १ महिना नाघिसकेको थियो । काग्रेस र एमाओवादी स्थानिय मधेशी नेताहरु खुल्ला रुपमै आन्द्योलनमा सक्रिय देखिएकाले उनीहरुले पुर्व घोषणा नै गरे, हामी दिपावली मनाउने छैनौ भनेर । तर एमालेले मधेशका जिल्लाहरुमा झन वढी कडा निर्देशात्मक आदेश दिएका थिए, जसरी भए पनि दिपावली मनाउनु पर्छ भनेर । त्यही अनुरुप पर्साको विरगंज देखि परवानीपुर सम्मको क्षेत्रमा याहाका स्थानिय कमिटीले तीन ठाउमा दीपावली मनाउने गोप्य योजना बनाए । यता नयां सविद्यानको विरुद्धमा आन्दोलनमा रहेको मधेशी मोर्चाले फेरी त्यही दिन विरगंजमा ठुलो प्रर्दशन गरेका थिए । प्रहरीसंगको भिडन्तमा त्यही दिन पनि एक जनाको मृत्यु भएको थियो । नयां संविद्यान जारीको साझ मधेशी मोर्चाको निर्देशनमा व्लायक आटक गर्न तयारी गरीरहेको वेला स्यानिय क्ेहि एमालेजनहरु दिपावली मनाउनका लागी एक ठाउमा जम्मा भए । तर स्थिती केन्द्रले सोचेको जस्तो सहज भएन, वरु जम्मा भएका एमालेजनहरुले आफनै केन्द्रिय नेतृत्वको आलोचना गर्दैृ परिस्थितीको समिकक्षा गरेर विना दिपावली मनाएर घर फर्के । उक्त जमघटमा सहभागी एक स्थानिय एमाले भन्छन, हामीहरु जम्मा भए पछि खासगरी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका कारण एमालेका स्थानिय मधेशी नेताहरुलाई याहा बस्न समेत अप्ठायारो भईसकेको निष्कर्ष निकाल्दै यो कुरा केन्द्रमा जस्ताको त्यस्तै रिर्पोटिंग गर्ने निर्णय गर्यो । ती नेता भन्छन, मधेशका पुरै जनता आन्दो्लित भइरहदा हाम्रो काठमाडौमा रहेका केन्द्रिय नेताहरुले त्यस विरुद्ध विभिन्न आलोचनात्मक टिकाटिप्पणीहरु गरीरहदा ग्राउण्डमा बस्ने एमालेहरुलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । ती नेता भन्छन, काग्रेसीहरु वाठा छन, उनीहरुका सवै मधेशका साथीहरु आन्दोलनमा छन, कुनै अप्ठायारा महसुस गरेका छैन, हामी केन्द्रको निर्णय मानेर सूरुमा बस्यौ, हाम्रो त याहा राजनितीक ग्राउण्ड नै समाप्त हुने अवस्था आयो । स्वयम एमालेका मधेशमा रहेका नेताहरुका अनुसार अध्यक्ष ओलीका कारण मधेशमा एमाले र ओली दुवै आन्द्योलनकारीहरुको निशानाम छन । आन्द्योलन सुरु भए पछि रौतहटमा पुर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको क्षेत्रमा एक स्थानिय नेता आन्दोलनमा सहभागी भए पछि पार्टीले उनलाई कारवाही नै गर्यो ।
जारी मधेश आन्द्योलनको मनोविज्ञान - "...पहाड फोर्ने अभियान"
at 8:43 AM Posted by Dalan
आज पुर्वको मेचि देखि पश्चिमको महाकाली सम्मको तराई मधेशको हुलाकी राजमार्गमा लाखौको संख्यामा मधेशीहरु विरोध प्रर्दशन गरेका छन । मधेशी मोर्चाले उक्त विरोध कार्यक्रमलाई मानव सांगलो नाम दिएका थिए ।
विहिवार विहान विरजगंज रक्सौल नाकामा धर्नामा बसेका केहि वुढापाका उमेरका मधेशी आन्दोलनकारीहरु आफसमा कुरा गर्दै थिए, "यी काठमाडौ ह न, सरवा यी चटान जईसन पहाड ह, का, जव तक यी पहाडके नफोरी तबतक हमनी मधेशीके कल्यान नई खे ।" अर्थात उनीहरु भन्दै थिए, काठमाडौ चटान जस्तो एउटा पहाड छ, जसलाई नफोरुन्जेल मधेशीहरुको कल्याण हुदैन । जारी मधेश आन्द्योलनका कारण गएको ४७ दिन देखि मधेश बन्द छ । तर ती वुदा पाकाको अनुहारमा रती पनि त्यसले उदासिन पारेको देखिएनन । वरु उनीहरु एक आपसमा यसलाई जती दिन आन्द्योलन गर्नु परे पनि यसलाई निर्णयक वनाउनु पर्ने भन्दै थिए । कतिपय मधेशी नेताहरुले जारी आन्द्योलनको क्रममा आर कि पारको नाराहरु दिए पछि आन्द्योलनकारीहरुको मुखवाट जताजतै अचेल यो सुन्न पाईन्छ । आखिर गएको ४७ दिन देखि जारी आन्द्योलनमा यत्रो जनसहभागी देखिन्छ, विरगंजका पत्रकार चन्द्रकिशोरलाई मैलै सोधे, के छ आन्दोलनमा सहभागी जनताहरुको मनोविज्ञान ? उनले उत्तर दिनु भन्दा पहिला सम्झाए, "यो आन्दोलन होईन, यो मधेश जनआन्दोलन हो ।" यसलाई यसरी वुझनुस । जनसहभागीता को आधारमा उनको दावी छ, "यसलाई आन्द्योलन मात्रै भन्न मिल्दैन," उनी भन्छन, "यो जनआन्द्योलन हो भन्ने मेरो दाबी छ ।"
जितेन्द्र सोनल रिहा
जिल्ला अदालत बाराले तराईमधेसमा जारी आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सह महामन्त्री जितेन्द्र सोनल र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जिल्ला अध्यक्ष नवलकिशोर सिंहलाई रिहा गर्ने अज आदेश दिएको छ । न्यायाधीश भोजराज शर्माको इजलासबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि उनीहरु रिहा भएका हुन् । अधिकार क्षेत्र नाघेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाएर कारागार पठाएको विरुद्धमा जिल्लाका बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र सिंहसहितका अधिवक्ताहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । तीन दिनको बहसपछि यस्तो आदेश भएको हो । प्रजिअले गैर कानुनी रुपमा मुद्दा चलाएकोले मुद्दा खारेजसहित बन्दी रिहा गर्ने आदेश भएको छ,ु अधिवक्ता अरुण दुबेले भने, ुप्रजिअले संविधान र कानुन मिचेर अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मुद्दा चलाएका थिए, त्यसैले मुद्दा खारेज भएको हो । बारापर्साका झन्डै ४० जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए ।